योगेश र ईश्वर पोखरेलको जम्काभेट, एक अर्कासँग बोल्दै बोलेनन्… « Bagmati Page
योगेश र ईश्वर पोखरेलको जम्काभेट, एक अर्कासँग बोल्दै बोलेनन्…
काठमाडौं । अस्पतालको प्राङ्गणमा विश्व स्वास्थ्य संगठनले दिएको २ वटा टेन्ट राखिएको थियो । जहाँ संघीय संसदका सांसदहरु तथा कर्मचारी कोरोना विरुद्धको भ्याक्सिन लगाउनका लागि नाम दर्ता लाइनमा उभिएका थिए । नाम दर्ता गरेकाहरुलाई टेन्टभित्र स्वास्थ्यकर्मीले बायाँ पाखुरामा भ्याक्सिन लगाइरहेका थिए ।
प्रतिनिधि सभा बैठकको पूर्वसन्ध्यामा बुधबार संघीय संसदका सांसदहरु तथा कर्मचारीहरुलाई ‘कोभिसिल्ड भ्याक्सिन’ दिने कार्यक्रम राखिएको थियो । ३ दिनसम्म चल्ने भ्याक्सिन दिने सो कार्यक्रमको पहिलो दिन सरकारका उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका ईश्वर पोखरेल पनि भ्याक्सिन लगाउन पुगेका थिए । प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूहमा दुबै अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उनीभन्दा पहिल्यै खोप लगाएर फर्किसकेका थिए ।
अस्पतालको प्राङ्गणमा राखिएको २ वटा टेन्टमध्ये एउटा टेन्टमा दर्ता गर्ने र खोप लगाउने काम भइरहेको थियो भने अर्को टेन्ट खोप लगाएपछि आराम गर्न सांसद तथा मन्त्रीहरुलाई छुट्टाइएको थियो । स्वास्थ्यकर्मीहरुले खोप लगाएपछि सांसदहरुलाई आधा घण्टा आराम गर्न भनिरहेका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओली समूहका नेतासमेत उपप्रधानमन्त्री पोखरेल मध्याह्न १२ बजे भ्याक्सिन लगाउन अस्पताल पुगेका थिए । खोप लगाउँदा ठट्टा गरिरहेका पोखरेलले खोप लगाएपछि दौरा मिलाउने क्रममा सोधे, ‘अनि को–को आउनुभयो त आज ?’ जवाफमा स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीले भने, ‘माधव नेपाल आउनुभयो, प्रचण्ड पनि आउनुभयो ।’
पोखरेलले भने, ‘उहाँको त कन्फर्टेबल ढंगले नै भो होला हैन ? त्यसपछि सञ्चारकर्मीले पनि सोधिहाले, ‘मन्त्रीज्यूलाई कत्तिको कन्फर्टेबल भयो ? जवाफमा उनले भने, ‘मलाई त उहाँको कन्फर्टेबल भन्दा राम्रो भयो ।’
खोप लगाएपछि मन्त्री पोखरेल आराम गर्ने टेन्टभित्र छिरे । जहाँ अन्य सांसदसँगै नेकपा प्रचण्ड नेपाल खेमाका नेता योगेश भट्टराई बसेका थिए । उनी बसे सँगैको कुर्सीमात्र खाली भएका कारण पोखरेलपनि सोही कुर्सीमा आरामका लागि बस्न पुगे ।
प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि मन्त्रीबाट राजीनामा गरेका योगेश भट्टराई र बहालवाला उपप्रधानमन्त्री भेटभएपछि केही कुराकानी हुन्छ कि ? प्रतिनिधि सभा बैठकको पूर्वसन्ध्यामा पार्टीको दुई खेमामा बाँडिएका दुई नेताको भेटमा कुनै अनौपचारिक भलाकुसारी होला कि भन्ने जिज्ञासाका साथ सञ्चारकर्मीहरूले उनीहरुतिर क्यामेरा सोझ्याइरहेका थिए । तर झन्डै २० मिनेट वल्लो–पल्लो कुर्सीमा बसेका दुई नेताबीच कुनै संवाद भएन ।
सँगै जोडिएको कुर्सीमा बसेपनि दुबैको हेराइको दिशा फरक थियो । दुवैजना असहज मानिरहेका थिए । स्वास्थ्यकर्मीले खोप लगाएपछि आधा घण्टा आराम गर्न भनेपनि उपप्रधानमन्त्री पोखरेल समय बिताउने बहाना खोजिरहेका थिए । एकछिन उनले खोप लगाएको कार्ड हेरे र कसैलाई फोन गरेर आफूले कोरोनाविरुद्धको भ्याक्सिन लगाएको जानकारी गराए ।
पोखरेल बसेको अर्को पट्टीको कुर्सी खाली भएपछि त्यहाँ बस्न आइपुगे जसपाका नेता उमाशंकर अरगरिया । उनले केहीबेर उमाशंकरसँग मसिनो स्वरका केही कुराकानी गरे । संचारकर्मीहरु कोरोना खोप लगाएका सांसदहरुको प्रतिक्रिया लिइरहेका थिए । नेपाल टेलिभिजनकी पत्रकार कालिका सिवाकोटी कोभिड खोप लगाएर आराम गरेर बसिरहेका सांसदहरुको प्रतिक्रिया लिइरहेकी थिइन् ।
उनले पहिला योगेश भट्टराईको प्रतिक्रिया लिइन् । त्यसपछि सँगै रहेका उपप्रधानमन्त्री पोखरेललाई पनि प्रतिक्रिया दिन आग्रह गरिन् । पोखरेलले ठट्टा गर्दै योगेशतिर हात लम्काउँदै भने, ‘उहाँ भाइको लिइहाल्नुभयो, मेरो किन चाहियो र ?’ पोखरेलको ठट्टामा भट्टराई थोरै हाँसे तर २० मिनेटको सँगैको बसाइमा दुई नेताबीच कुनै अनौपचारिक संवाद समेत भएन । आराम गर्ने समय सकिएपछि भट्टराई र उपप्रधानमन्त्री पोखरेल आफ्नो बाटो लागे ।
गत मंसिर ५ गते अघिसम्म एउटै सरकारमा मन्त्री रहेका योगेश भट्टराई र ईश्वर पोखरेलको अहिले राजनीतिक मोर्चा फेरिएको छ । प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि त्यसको विरोध गर्दै भट्टराईसहित अन्य ६ मन्त्रीले सामूहिक राजीनामा दिएका थिए । कानुनी रुपमा विभाजन भइनसकेको र राजनीतिक रुपमा विभाजित भइसकेको नेकपाका दुई पक्ष यतिबेला शक्ति संघर्षमा रहेका छन् । प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनापछि अब यी दुई पक्षबीचको शक्ति संघर्ष संसदमा केन्द्रीत भइरहेको छ । यसकै साइड इफेक्ट पोखरेल र भट्टराईबीचको आजको संवादहीनता हो भन्ने बुझ्न गाह्रो छैन । -रातोपाटी
समाज विचलनतिर गइरहेको छ : अध्यक्ष प्रचण्ड
काठमाडौं । नेकपा(माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाली समाज विचलनतिर गइरहेको बताएका छन् ।
काठमाडौं । संघीय संसद अन्तर्गतको राष्ट्रिय सभाले सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को लागि प्रस्तुत